Yokuhlala & Izitulo - China Gormeet Plastic
inqubo yokubumba Blow nazo ngokubanzi ukusebenzisa ezitulweni ezivelisa, le iimveliso uzinzo imichiza, acid, anti-emile, ukubanda & ubushushu-resistant, uzinzo umbala, kulula ukufaka nokulawula. Kukho ikakhulu iindidi ezimbini iimveliso zethu: izitulo imoto baby, izitulo ukusetyenziswa okuqhelekileyo. izihlalo imoto Baby, izitulo lokomeleza Nokuba kungenxa iihambo ezimfutshane okanye uhambo olude, izitulo imoto na izinto eziyimfuneko ukuze abantwana, izitulo ukhuseleko umntwana aye kucingelwa ukuba yenye yezona ndlela isebenzayo yokuthintela abantwana ngequbuliso kukwenzakala ...
Yangaphandle Options wabumba
2. Custom Ilogo Plate ne nokubunjwa
3. boonobumba Bakhula
4. Custom Full Lid uvuleke Plate
5. ingqokelela Feature
inqubo yokubumba Blow nazo ngokubanzi ukusebenzisa ezitulweni ezivelisa, le iimveliso uzinzo imichiza, acid, anti-emile, ukubanda & ubushushu-resistant, uzinzo umbala, kulula ukufaka nokulawula.
Kukho ikakhulu iindidi ezimbini iimveliso zethu: izitulo imoto baby, izitulo ukusetyenziswa okuqhelekileyo.
izihlalo imoto Baby, izitulo booster
Nokuba iihambo ezimfutshane okanye uhambo olude, izitulo imoto na izinto eziyimfuneko ukuze abantwana, izitulo ukhuseleko umntwana aye kucingelwa ukuba yenye yezona ndlela isebenzayo yokuthintela abantwana ngequbuliso ukwenzakala kwiingozi zendlela.
Sinikezela izihlalo imoto yayo yonke iminyaka, ezitroneni imoto usana olusanda kuzalwa ezihlalweni lokomeleza eyenzelwe abantwana abadala.
· Made of iHDPE original
ubukhulu Uniform kunye crashworthiness strong
Nendawo kuya eziphilayo, kunye nokumelana nefuthe kakuhle
Ngaba ukuvelisa isakhelo zeplastiki kuphela, okanye ndawonye zonke iindawo ukwenza kweemveliso ezigqityiweyo.
Sebenzisa Common nezitulo
Thina yenza isakhiwo isitulo ngokutsho umsebenzi oyifunayo, uze uzenze un-gqitha ukuba zifanele ukuba enye inxalenye imveliso, umzekelo, zokubambelela, backrests njalo njalo. Inkqubo yethu abalawula ubungakanani ngethuba yemveliso nokumelana elivumelekileyo, yaye usoloko kakuhle kolawulo imibala phakathi ngokwamaqela ahlukeneyo.
Izitulo zibe textured imiphezulu & e iimilo ezahlukeneyo, ubukhulu, imibala kunye nobunzima.
Materials kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho:
Iinkonzo kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho:
· Zomngundo lokuvelisa
· Isixhasi Product
· Ukuzaliseka imisebenzi abangabancedani
· Ukuthengwa subcomponents
· Assembly nokupakishwa
· Lokuthumela ngqo kumntu wesithathu
Umfanekiso for Reference